लिच्छवीकालीन भित्तेचित्र भेटियो - Subhay Postलिच्छवीकालीन भित्तेचित्र भेटियो - Subhay Post
लिच्छवीकालीन भित्तेचित्र भेटियो
सुभाय् संवाददाताDecember 26, 2019 मा प्रकाशित (१ साल अघि) अनुमानित पढ्ने समय : २१ मिनेट
काठमाडौं : जयबागेश्वरी मन्दिरमा प्राचीन भित्तेचित्र भेटिएको छ। पुनर्निर्माणका लागि मन्दिर भत्काउँदा भित्तेचित्र फेला परेको हो। मन्दिर भत्काउँदा भित्र अर्को मन्दिरको संरचना भेटिएको थियो। बाहिरको मन्दिर मल्लकालीन भए पनि भित्री भागको मन्दिर लिच्छवीकालीन भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। सोही मन्दिरको गारोमा कलात्मक चित्र र बुट्टेदार आँखीझ्याल भेटिएको हो। जयबागेश्वरी मन्दिर विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको पशुपति क्षेत्रभित्र पर्छ।
विज्ञको टोलीले भित्तेचित्रको सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेका छन्। चित्रबारे एकिन तथ्य अझै भेटिएको छैन। यसअघि पुनर्निर्माणका लागि मन्दिर भत्काउँदा तीन वटा गजुर भेटिएका थिए। माटाबाट बनाइकाले मन्दिरको महत्व अझै बढेको छ। संस्कृतिविद्का अनुसार प्रत्येक १२/१२ वर्षमा मन्दिरको कलेवर फेरिन्छ। ‘कलेवर फेर्दा जगवागेश्वरी, गणेश र भैरवको नयाँ मूर्ति माटाको बनाइन्छ ।
माटोले बनेको मन्दिरको भित्ता जीर्ण छ। चित्र प्रष्ट छैनन्। आँखीझ्याल ठाउँठाउँमा मक्किएको छ। भित्ता कुनै बेला पनि ढल्ने स्थितिमा छ। चित्र तत्काल संरक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ। एक साता अगाडि पुरातत्व विभागले मन्दिरसम्बन्धी अनुसन्धान गरेर मात्र पुनर्निर्माण अघि बढाउन पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई सुझाव दिएको थियो। तर इतिहास नै मेटिने गरी मन्दिर जथाभावी भत्काउने काम जारी छ।
मंगलबारको छलफलमा मन्दिरको गारो जीर्ण भएकाले भत्काउनुपर्ने पक्षमा पुरातत्व विभागले सहमति जनाएको छ तर मन्दिर व्यवस्थापनले भित्तेचित्रको संरक्षण गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। प्रदेश ३ का सांसद नरोत्तम वैद्य भित्री मन्दिरको संरचना र भित्तेचित्र हटाउने निर्णय उचित नभएको बताउँछन्। ‘पुरानो मन्दिरलाई पहिले पनि संरक्षण गरेर राखिएको जयवागेश्वरी मन्दिरबाटै प्रमाणित भइसक्यो,’ उनले भने, ‘अहिले हामीसँग संरक्षण गर्ने सामथ्र्य नभएको हो ? ’ पुनर्निर्माण गर्दा भित्तेचित्र यथावत् राखेर ऐतिहासिक झल्को दिनुपर्ने उनको मत छ।
पुरातत्व विभागकी अधिकृत अमृता भट्टराईका अनुसार गारोलाई जस्ताको तस्तै झिकेर मन्दिरको द्यःछेँमा राखिने र त्यसपछि संग्रहालयमा सार्न सकिन्छ। ‘भित्ता भत्कनै लागेको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसलाई झिकेर सुरक्षित राख्नुपर्ने देखिन्छ।’ भित्री मन्दिरको संरचना भत्काउन पुरातत्व, कोष र मन्दिर पुनर्निर्माण सहजीकरण समितिबीच सहमति भएपछि गारो झिक्ने निर्णय भएको हो। साथै माटोले बनेको उक्त मन्दिरमा चुना र सुर्की प्रयोग गर्न विभागले सहमति जनाएको छ।
प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ अनुसार प्राचीन र ऐतिहासिक सम्पदा पुनर्निर्माण गर्दा पुरानै शैली र प्रावधान अपनाउनुपर्ने हुन्छ। सम्पदा अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘ऐनमै पुरातात्विक महत्वका संरचना जस्ताको तस्तै राख्नु पर्ने उल्लेख छ। त्यसलाई हटाउने, मेटाउनेतर्फ सम्बन्धित निकाय लाग्नु हुन्न।’
संस्कृतिविद् हरिराम जोशीका अनुसार जयवागेश्वरी मन्दिर १३ सय वर्ष पुरानो हो। ‘किराँतकालमा निर्मित यो मन्दिर लिच्छवीकालमा पुनर्निर्माण भएको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला मन्दिर पुनर्निर्माण गर्दा माटोले नै बनाइएको थियो।’ महासरस्वती, महाकाली र महालक्ष्मीको प्रतीक मानिने यो मन्दिरसँग सती प्रथाको प्रसंगसमेत जोडिन्छ।
पोखराय् सुभाय् मिडियाया प्रकाशन, रिता महर्जनया उपन्यास “हामा” बिमोचन !
ललितपुरको मंगलबजारमा ग्यास सिलिन्डर विस्फोट, ४ जनाको मृत्यु
तिब्बती शरणार्थी भन्छन्— ‘दुङाल’ मेरै कथा हो
लक्ष्मी व सरस्वती (चिबाखं)